Arimaha Bulshada – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 18/02/2019 ] Qarax Bam ah oo goordhaw ka dhacay magaalada Baydhabo	Arimaha Bulshada
Qarax Bam ah oo goordhaw ka dhacay magaalada Baydhabo
18/02/2019 B M 0
Hiiraan Xog, Qarax Bam ayaa goor dhow oo caawa ah waxaa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kaasoo laga maqlay qeybo ka mid ah xafadaha magaalada Baydhabo. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu […]
AKHRISO:- Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo magacaabay xil cusub
Hiiraan Xog, Madaxweynaha maamulka Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Isniin ah soo saaray wareegto lagu magacaabay xilal cusub. Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha Jubaland ayaa guddoomiyaha Guddiga Shaqada iyo Shaqaalaha loogu Magacaabay Siyaad Ibraahim […]
AKHRISO:- Xisbiga Nabadda Iyo Horumarka oo taageera jawaabtii dowladda Soomaaliya ka bixisay go’aankii Kenya ka soo baxay.
Hiiraan Xog, Xisbiga Nabadda Iyo Horumarka ee uu hoggaamiyo Madaweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday Xisbiga labaad ee si cad u taageera jawaabtii dowladda Federaalka ka bixisay go’aankii Kenya. Qoraal xisbigaas kasoo […]
DAAWO SAWIRO:- Madaxweyne Farmaajo oo si heersara ah logu soo dhaweeyay dalka Burundi
Hiiraan Xog, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Burundi, waxaana garoonka dayuuradaha magaalada Bujumbuura uu ku soo dhaweeyay dhiggiisa dalkaas Pierre Nkurunziza. Wafdiga Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya ayaa kulamo lagu […]
DHAGEEYSO:- Degmooyin ka tirsan Hirshabeelle oo yeelanayo gole degaan
Hiiraan Xog, Maamulka Hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay degmada Warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ka daah furay dhismaha golaha deegaanka. Xubno ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka degmada Warsheekh iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka qeyb […]
DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Daah-furay Dhismaha Waddooyinka Jowhar Iyo Afgooye
Hiiraan Xog, Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS)، mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta daah-furay mashruuca dhismaha waddooyinka isku xira Muqdisho iyo magaalooyinka Jowhar iyo Afgooye ee maamul gobaleedyada Hir-shabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ra’iisul Wasaare […]
AKHRISO:- Xisbiga Wadajir oo ka hadlay xiisada Soomaaliya iyo Kenya
Hiiraan Xog, War Saxaafadeed kasoo baxay Xisbiga Wadajir uu Hogaamiyo Siyaasiga Mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa looga hadlay khilaafka Diblumaasiyadeed ee soo kala dhax galay Soomaaliya iyo Kenya. Xisbiga ayaa taageeray go’aanka dowlada federaalka ka […]
Al-Shabaab oo sheegtay dil ka dhacay degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose
Hiiraan Xog, Al Shabaab ayaa saakay xaafad katirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ay ku dileen nin la sheegay in uu katirsanaa saraakiisha ciidanka dowlada gaar ahaan Asluubta. War kasoo baxay Al Shabaab […]
Ganacsatada dalka Kenya ee Jaadka keenta Soomaaliya oo Fariin Xasaasi ah soo diray
Hiiraan Xog, Xiriirka sii xumaanaya ee hada u dhaxeeya dowlada Soomaaliya iyo Kenya ayaa laga cabsi qabaa in saameyn diblumaasiyadeed kaliya uusan reebin balse saameyn xoogan ku yeesho ganacsiga labada wadan u dhaxeeya. Dowlada Kenya […]
Dowlada Poland oo qoonsatay hadal ka soo yeeray Israa’iil
Hiiraan Xog, Ra’iisulwasaaraha dalka Poland Mateusz Morawiecki ayaa baajiyay safar uu ku tagi lahaa Israa’iil ka dib markii uu qoonsaday hadal ka soo yeeray dhigiisa Israa’iil kaas oo ku saabsan xasuuqii dadka Yuhuudda ah loo […]